Dib-u-habeyn Verizon Smartplay Deynta Lagu Sameeyay IBC 2019 | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » Featured » Dib-u-habeyn Verizon Smartplay Deyn-ka-saarid ah oo laga sameeyay IBC 2019
Dib-u-habeyn Verizon Smartplay Deyn-ka-saarid ah oo laga sameeyay IBC 2019
Iyadoo IBC 2019 Markii ay dhamaatay, waxay lama huraan u tahay raadinta qaabab badan oo cajaa'ib leh oo casri ah oo warbaahinta lagu soo bandhigay shirka. Mid ka mid ah waxyaabaha sida gaarka ah uga soo horjeeday ayaa ahaa Warbaahinta Verizon. At IBC 2019, Verizon warbaahinta ayaa kahadashay Verizon Smartplay, casriyeynta ugu dambeysay ee qalabkeeda warbaahinta.
Waa maxay Verizon Smartplay?
Verizon Smartplay, oo sidoo kale loo yaqaan Stream Routing, waa madal Verizon Media ah oo gudbisa taraafikada fiidiyowga ee shabakadaha badan ee gudbinta macluumaadka (CDNs), kaas oo u oggolaanaya waqtiyada sida ugu dhakhsaha badan u bilaabma iyo yareynta dib-u-dhiska. Verizon Smartplay waxay isticmaashaa Verizon Media's server iyo xogta waxqabadka macaamiisha ee shabakadeeda adduunka iyo qaybinta aaladda si ay si firfircoon u gaarsiiso taraafikada. Tani waxay noqon kartaa mid wax tar leh marka loo eego xaaladaha ku lug leh shebekadaha la soo dhaafay. Iyada oo taraafikada si otomaatig ah dib loogu wareejinayo, ayaa idaacadaha laga ilaalin doonaa wixii dhibaato u geysan kara shabakadda.
Sidee Verizon Smartplay u Gaarsiisaa Waxyaalaha Tayada Ka Wanaagsan
Dhowr ka mid ah faa'iidooyinka Verizon Smartplay waxaa ka mid ah:
Muuqashada waxqabadka Ad
Madaxa Sarkaalka Waxsoosaarka, Platform Media ee Verizon Media
Marka laga wada hadlayo tayada Verizon Smartplay si aad u faahfaahsan, sarkaalka wax soo saarka ee Verizon Media, Ariff Sidi tan ayaa laga odhanayaa, Waxaan awood u siineynaa wariyaasha iyo bixiyeyaasha sheyga inay si kalsooni leh ugu dhiibaan daawadayaasha tayada ugu fiican meel kasta oo ay dunida ka joogaan. Taas macnaheedu waa inaad hubin karto in dhagaystayaashaadu marwalba heli doonaan khibrada ugu fiican ee suurogal ah. ”
Verizon Smartplay wuxuu wanaajiyaa gelinta xayeysiinta
Ka sokow dib-u-cusboonaysiinta taraafikada, Verizon Smartplay sidoo kale waxay u shaqeysaa sidii kor u qaadista Ad Server Debug, oo ku bixinaysa aragga dhamaadka-dhamaadka dhamaadka nidaamka xayeysiinta, kaas oo iftiimin kara khaladaadka, waqtiyada iyo arrimaha raadraaca. Xawaalad kasta oo xayeysiis ah, maamule xayeysiis ah ayaa ka shaqeeya aruurinta iyo keydinta xogta, taas oo ay kujirto waqtiyada jawaabta iyo waqti-ka-biximaha xayeysiiska qaybta saddexaad, iyo xog heer-heer fadhigiisu sarreeyo oo lagu kaydin karo muddo afar iyo toban maalmood ah.
Sidi wuxuu si faahfaahsan u sharraxay isticmaalka cinwaanka xayeysiiska xayeysiiska markuu yidhi Idaacadaha iyo kuwa wax abuura waxay awood u leeyihiin inay gudbiyaan durdurrada shaqsiyeed ee daawadayaasha laakiin, ilaa iyo hadda, heerar kala jajaban oo isu beddelaya heerar warshadeed oo ku xeeran xayeysiinta OTT ayaa adkeeyay inay helaan aragti cad oo ku saabsan waxa dhabta ah ee socda inta lagu gudajiro xayeysiinta xayeysiinta. Ad Server Debug wuxuu wax ka baddalayaa tan isagoo gudbinaya daahfurnaan aad u weyn iyo faham ku saabsan sida xayeysiiska loo dhiibo, wuxuu awood u siinayaa bixiyeyaasha adeegga inay sare u qaadaan tayada waayo-aragnimada ee malaayiinta daawadayaasha adduunka. ”
Verizon Smartplay iyo Video Streaming Shaqsiyadeed
Bartilmaameedka Verizon Smartplay Content wuxuu bixiyaa durdurro fiidiyow ah oo ku-shaqsiyeeysan shakhsiyadeed kaas oo loo maro tikniyoolajiyadda kadeedka muuqda. Sababtoo ah meelaha bannaan ee loo yaqaan 'blackouts' waxay u baahan yihiin kuwa wax u qeybiya si ay u xaddidaan wax kasta oo ku saleysan goobta daawada ama nooca aaladda, warbaahinnada waa inay gudbiyaan waxyaabo kale oo aan ahayn halkii ay ka ahaan lahaayeen farriin xariijimo xaddidan oo halis ku ah luminta daawadayaasha si loo ilaaliyo ka qeybgalka daawadayaasha. Marka loo eego UI-da sahlan, macaamiisha waxay awoodaan inay xaddidaan jadwalka t0 ka hor waqtiga ayna qorsheeyaan qaybinta waxyaabaha ku kooban shaqsiyeed si khibrad wanaagsan u leh aragtida aragtida. Macaamiisha ayaa abuuri kara dhagaystayaal, dhisi kara qaanuunno, ka dibna ku dabaqi kara shuruudahan hantida muhiimka u ah.
Si loo dheereysto qulqulka qormooyinka dhaxalka ee dhaxalka, badalida waxyaabaha ka kooban iyo maareynta dhagaystayaasha ayaa si otomaatig ah loogu isticmaali karaa qulqulka shaqada oo dhan iyadoo la adeegsanayo Jadwalka Munaasabadda iyo Ogeysiiska Is-gaarsiinta (ESNI) Iyadoo la raacayo habka qaabeynta, Verizon Smartplay Content Targeting wuxuu gartaa goobjoogaha, goobta ama aaggiisa si uu u bixiyo khibrad aan fiicnayn gaar ahaan muuqaalkiisa.
Verizon Smartplay iyo OTT
Markii laga hadlayey shakhsiyadda OTT, ayuu Sidi yiri Shakhsi ahaaneed ee 'OTT' waxay kuxirantahay muuqaalka shabakadda si loo abuuro liis gaar ah oo ka kooban nuxurka, xayeysiiska iyo tilmaamaha dib u soo celinta isticmaale kasta. Waxaad ubaahantahay inaad hubiso inaad shaqsiyeeli karto waxyaabaha aad ka kooban tahay isla markaana aad la jaan qaadi karto xuquuqaha maxalliga ah, iyadoon loo eegayn inta daawadayaasha ah, ayuu yidhi Sidi. "Smartplay wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dhisto dhagaystayaal iyo qawaaniin lagu xoojinayo hanti kasta, qof kasta oo riixaya ciyaarta, meel kasta oo adduunka ah."
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Warbaahinta Verizon Oo Verizon Smartplay, ka dibna hubi www.verizonmedia.com.
Magewell's Muuqaalka Qalabka Qalabka Qalabka ee cusub ee 'Dage' ee cusub ee Magewell - January 25, 2020
ASUSTOR's AS5202T iyo AS5304T Waxay ku qiimeeyeen inay yihiin Qalabka Shanta NAS - January 25, 2020
ASUSTOR waxay ku wargalineysaa Macaamiisha inay lahaadaan Amniga Awoodda Xogta - January 24, 2020
galinta Ad Broadcast Engineer Broadcast Engineering Caaqilada Cobalt content Graham Chapman Prmoted toEditor content tayo sare leh Ott Spears & Fiilooyinka subtitling, Digital Nirvana, kormeerka warbaahinta, IBC gaadiidka TVU Networks Verizon Warbaahinta Verizon Verizon Smart Ciyaar Video Engineer	2019-09-27
Previous: Kaaliyaha Kaameeraha / Kaaliyaha Wax Soosaarka
Next: "Sneaky Pete" Midabaynta ayaa lagu Saxay Gudaha Studio-ga DaVinci Resolve